【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】အဆုတျရဝေိုငျးခွငျး (Pleural Effusion)အကွောငျးသိကောငျးစရာ | Opinion Leaders
အဆုတျရဝေိုငျးခွငျး(Pleural Effusion) ဆိုတာ အဆုတျကို အုပျထားတဲ့ အမွှေးပါးနှဈခုဖွဈတဲ့ အတှငျးအလှာ (Visceral pleura) နဲ့ အပွငျဘကျအလှာ (Parietal pleura) ကွားထဲက pleural space လို့ချေါတဲ့ နရောထဲမှာ အရညျတှေ ဝငျနတောကို ချေါတာပါ။ ဒီနရောမှာ ပွညျတှစေုနရေငျတော့ empyema လို့ချေါပီး သှေးတှစေုနရေငျတော့ haemothorax လို့ချေါပါတယျ။
(၁) Transudative Effusion
သှေးကွောတှငျး ဖိအားမြားခွငျးကွောငျ့ ဖွဈခွငျး
-နှလုံးအမောဖောကျခွငျး (cardiac failure)
-နှလုံးအမွှေးပါးရောငျခွငျး (Constrictive pericarditis)
-အရညျအသှငျးမြားခွငျး (Fluid overload)
အသားဓါတျ protein နညျးခွငျးကွောငျ့ဖွဈခွငျး
-ကြောကျကပျရောဂါ (Nephrotic syndrome)
-အူစုပျယူမှု မကောငျးခွငျး (malabsorption)
Meig symdrome ( သားဥအိမျ fibroma နှငျ့ ညာဘကျအဆုတျရဝေိုငျးခွငျး)
အဆုတျအမွှေးပါးရဲ့ သှေးကွောမြှငျလေးတှကေ အရညျစိမျ့ထှကျခွငျး
-အရပွေား လေးဘကျနာ (SLE)၊ အရိုးလေးဘကျနာ (RA)
စမျးသပျကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ရရှေိတဲ့ဘကျခွမျးမှာ လဝေငျတာနညျးတဲ့ လက်ခဏာတှေ တှရေ့မှာဖွဈပီး ရရှေိတာ အရမျးမြားရငျတော့ လပွှေနျက ရမေရှိတဲ့ဘကျကို အတှနျးခံရလို့ ရှနေ့မှောပါ။
ဘယျလို စဈဆေးမှုတှေ လုပျဖို့လိုလဲ?
အဆုတျရဝေငျတာသိဖို့ကတော့ ရငျဘတျ ဓါတျမှနျ (Chest Xray) ရိုကျကွညျ့ရငျ သိနိုငျပါတယျ။ ရငျဘတျအာထရာဆောငျး ရိုကျပွီးလညျး အရညျရှိတဲ့နရောကို သိနိုငျပါတယျ။ အရညျထဲက ပါဝငျပစ်စညျးတှေ သိဖို့နဲ့ ရဝေငျရခွငျး အကွောငျးရငျးသိဖို့ကတော့ diagnostic aspiration လို့ချေါတဲ့ အဆုတျထဲက အရညျကို စုပျထုပျပီး ဓါတျခှဲခနျးမှာ စဈကွညျ့တာပါ။ လိုအပျရငျ အသားစယူတဲ့ထိ လိုနိုငျပါတယျ။
အပျေါမှာ ဖျောပွထားတဲ့ မောခွငျး ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး လက်ခဏာတှရှေိရငျတော့ အရညျစုပျထုတျဖို့လိုပါပီ။ ခဏခဏ အရညျဝငျရငျတော့ bleomycin သုံးပီး pleurodesis လုပျဖို့လိုမှာပါ။
အဆုတ်ရေဝိုင်းခြင်း(Pleural Effusion) ဆိုတာ အဆုတ်ကို အုပ်ထားတဲ့ အမြှေးပါးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွင်းအလွှာ (Visceral pleura) နဲ့ အပြင်ဘက်အလွှာ (Parietal pleura) ကြားထဲက pleural space လို့ခေါ်တဲ့ နေရာထဲမှာ အရည်တွေ ဝင်နေတာကို ခေါ်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ ပြည်တွေစုနေရင်တော့ empyema လို့ခေါ်ပီး သွေးတွေစုနေရင်တော့ haemothorax လို့ခေါ်ပါတယ်။
သွေးကြောတွင်း ဖိအားများခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခြင်း
-နှလုံးအမောဖောက်ခြင်း (cardiac failure)
-နှလုံးအမြှေးပါးရောင်ခြင်း (Constrictive pericarditis)
-အရည်အသွင်းများခြင်း (Fluid overload)
အသားဓါတ် protein နည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်း
-ကျောက်ကပ်ရောဂါ (Nephrotic syndrome)
-အူစုပ်ယူမှု မကောင်းခြင်း (malabsorption)
Meig symdrome ( သားဥအိမ် fibroma နှင့် ညာဘက်အဆုတ်ရေဝိုင်းခြင်း)
အဆုတ်အမြှေးပါးရဲ့ သွေးကြောမျှင်လေးတွေက အရည်စိမ့်ထွက်ခြင်း
-အရေပြား လေးဘက်နာ (SLE)၊ အရိုးလေးဘက်နာ (RA)
စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ရေရှိတဲ့ဘက်ခြမ်းမှာ လေဝင်တာနည်းတဲ့ လက္ခဏာတွေ တွေ့ရမှာဖြစ်ပီး ရေရှိတာ အရမ်းများရင်တော့ လေပြွန်က ရေမရှိတဲ့ဘက်ကို အတွန်းခံရလို့ ရွေ့နေမှာပါ။
ဘယ်လို စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဖို့လိုလဲ?
အဆုတ်ရေဝင်တာသိဖို့ကတော့ ရင်ဘတ် ဓါတ်မှန် (Chest Xray) ရိုက်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်အာထရာဆောင်း ရိုက်ပြီးလည်း အရည်ရှိတဲ့နေရာကို သိနိုင်ပါတယ်။ အရည်ထဲက ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ သိဖို့နဲ့ ရေဝင်ရခြင်း အကြောင်းရင်းသိဖို့ကတော့ diagnostic aspiration လို့ခေါ်တဲ့ အဆုတ်ထဲက အရည်ကို စုပ်ထုပ်ပီး ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စစ်ကြည့်တာပါ။ လိုအပ်ရင် အသားစယူတဲ့ထိ လိုနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ မောခြင်း ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း လက္ခဏာတွေရှိရင်တော့ အရည်စုပ်ထုတ်ဖို့လိုပါပီ။ ခဏခဏ အရည်ဝင်ရင်တော့ bleomycin သုံးပီး pleurodesis လုပ်ဖို့လိုမှာပါ။